Iprofayile yeBTK Strangler uDennis Rader
NgoLwesihlanu, ngoFebhuwari 25, 2005, u-BTK Strangler, uDennis Lynn Rader, wabanjwa e-Park City, eKansas kwaye kamva wahlawuliswa ngamanani ayishumi okubulala. Ngomhla emva kokubanjwa kwakhe u-Wichita oyiNtloko yamaPolisa uNorman Williams wamemezela kwingqungquthela yenkomfa, "into ephambili kukuba iBTK ibanjwe."
Rader wayengomnye wabantwana abane kubazali uWilliam noDorothea Rader.
Intsapho yayihlala eWichita apho uRader waya khona kwiWikita Heights High School. Emva kokuhamba ngokukhawuleza ngo-1964 ukuya kwiYunivesithi yase-Wichita State, uRader wajoyina i-US Air Force. Wachitha iminyaka emine ezayo njengomatshini we-Air Force kwaye wahlala phesheya eMzantsi Korea , eTurkey, eGrisi nase-Okinawa.
I-Rader igxotha umkhosi womoya:
Emva koMkhosi wamandla abuyele ekhaya waza waqala ukusebenza ngokufumana isikolo sakhe. Waqala ukuya kwi-Butler County Community College e-El Dorado emva koko wathunyelwa kwiYunivesithi yaseKansas Wesleyan eSalina. Ngomhla ka-1973 wabuyela kwiYunivesithi yase-Wichita State apho ngo-1979 waphumelela kwisigqeba esiPhakathi koLawulo lwezoBulungisa.
Umlando wezeMisebenzi ene-Common Thread - Ukufikelela:
Ngexa e-Wichita State wayesebenze ixesha elithile kwisebe lezilwanyana kwi-IGA ePark City.
Ukususela ngo-1970 ukuya ku-1973 wayengumhlanganisi kwi-Coleman Inkampani, ukudibanisa inkampu yempahla kunye nezixhobo.
Ukususela ngoNovemba 1974 ukuya kuJulayi 1988 wayesebenza kwinkampani yokhuseleko yasekhaya, iiNkonzo zeKhuseleko ze-ADT, apho ayekwazi ukufikelela kumakhaya njengomphathi wokufaka. Kuye kwaphawulwa ukuba ishishini landa njengoko ukwesaba koluntu kumbulali weBTK kwanda.
Ukususela ngo-1990 de ukubanjwa kwakhe ngo-2005, uRader wayengumphathi weSebe lokuQinisekisa kwi-Park City, isebe elinamalungu amabini, elisebenza ngokubanzi "ukulawulwa kwezilwanyana, iingxaki zezindlu, ukucandwa, ukugcinwa kwemvume jikelele kunye neemeko ezinobungozi . " Ukusebenza kwakhe kwisimo sakhe kwachazwa ngokuthi "unqabileyo kwaye unzima kakhulu" ngabamelwane.
Kwakhona waba ngumphathi wesango lomsebenzi ngo-1989.
Esebenzayo kwiCawa kunye neNkokeli yeClubs Scout:
Radar watshata noPaul Dietz ngoMeyi, ngo-1971 waza waba nabantwana ababini emva kokuqala kokubulala. Babenendodana ngo-1975 kunye nentombi ngo-1978. Kwimizuzu engama-30 wayelungu leCawa likaKristo Luthere kwaye wayengumongameli okhethwe yiBhunga leBhunga. Kwakhona wayengumholi weCub Scout kwaye wayekhunjulwa ngokufundisa indlela yokwenza amaqhina athile.
Umzila owawudlulisela amapolisa kwiNgxowa-mboleko:
Ingeniswe kwimvulophu ehambileyo ithunyelwe kwisikhululo se-KSAS-TV eWichita yayingu-1.44-megabyte i-Memorex ikhompyutheni yediski ukuba i-FBI yakwazi ukulandela iRader. Kwakhona ngelo xesha i-sampuli ye-tissue yentombi kaRader yabanjwa kwaye yangeniswa ukuhlolwa kwe-DNA. Isampuli yayingumdlalo wentsapho kwi-semen eqokelelwe kwenye yecala lolwaphulo-mthetho lweBTK.
Ukubanjwa kukaDennis Rader:
NgoFebhuwari 25, 2005 I-Rader yamiswa ngabasemagunyeni ngelixa ehamba ekhaya. Ngelo xesha amaninzi amashishini otyholiso yomthetho aguquke kwikhaya likaRader kwaye aqala ukukhangela ubungqina bokudibanisa iRader ekubulaweni kweBTK. Baye bafuna icawa ayenayo kunye neofisi yakhe kwiHolo yeSixeko. Iikhompyutha zazisusa zombini iofisi yakhe kunye nekhaya lakhe kunye ne-pantyhose emnyama kunye nesitya se-cylindrical.
I-Rader ihlawulwe nge-10 BTK Abahluleli:
Ngomhla ka-1 kweyoKwindla ka-2005 uDennis Rader wahlawuliswa ngokusemthethweni ngamanani angama-10 okubulala kunye nokubanjwa kwakhe kwi $ 10 yezigidi. I-Rader yavela phambi koMgwebi uGregory Waller ngeenkomfa zevidiyo esuka kwiseli yejele waza waphulaphula izinto ezili-10 zokubulala ezifundwayo kuye, ngelixa amalungu omndeni akhe maxhoba kunye nabanye abamelwane bakhe bebukele enkundleni.
Kukholelwa ukuba uPaula Rader, ochazwe njengowesifazane othetheleyo kwaye otholileyo, wayethuthunyiswa kwaye wayonakalisa iziganeko ezenzeka ngokubanjwa komyeni wakhe njengabantwana bakhe ababini. Njengoko lo mbhalo, uNkosikazi uRader akazange a tyelele uDennis Rader entolongweni yaye yena nentombi yakhe kuthiwa bangaphandle kwimeko yelizwe.
Ukuhlaziywa: NgoJuni 27, ngo-2005, uDennis Rader unetyala elimalunga nama-10 e-first degree degree of death, emva koko waxelela inkundla ngokukhawuleza iinkcukacha ze-"Ukuboshwa, Ukuhlushwa, Ukubulala" okuphazamisa indawo yaseWichita, eKansas phakathi kuka-1974 no-1991.
Imiqulu ye-BTK Confession
Umthunywa ongabonakaliyo nguStephen Singular
Ngaphakathi kwengqondo yeBtk nguJohn Douglas
Oko Kufuneka Ukwazi NgeMetrover Retrograde
Amagama aqhelekileyo adidekile: Nabani na
I-12 Enkulu kakhulu iMercedes-Benzes Yonke ixesha
Umlando omnyama kunye nexesha labafazi 1860-1869